Ukuhlaselwa komsindo kwelinye lamalingani linempembelelo embi kwisinye isiqingatha. Abasetyhini badla iminyaka, okanye ngamashumi eminyaka, bazama ukufunda indlela yokuziphatha ngokufanelekileyo kunye nomntu onomsindo kwaye bazame ukuqonda indlela yokuphatha ukucaphuka komntu kunye nendlela yokuphucula kakuhle isicwangciso sokuziphatha ngexesha elinjalo. Ngoko, yintoni omele ukwenze xa iqabane lakho libuhlungu emhlabeni wonke?
Ungatsho oko ngaphambi kokuba uphathe ukuhlaselwa kwesohlwayo kumntu kwaye ukhethe isicwangciso esifanelekileyo salokhu, kufuneka uchaze ngokucacileyo imbangela yengqumbo yakhe. Kwimeko apho isitshixo sokucaphukisa isicatshulwa semvakalelo engathandekiyo enye okanye enye inkcukacha, kuyimfuneko ukunyanga oku kuhlaselwa ngokuqhekeza ngokuqhelekileyo. Nika umhlobo wakho ithuba lokuziqonda kwaye ufumene iingxaki zemvakalelo ezikhokelela kuye, ezibangela ukucaphukisa. Kwaye, bakholwa yinto, banokuthi bahle kakhulu, kodwa ngoxa yena ngokwakhe engaziqondi, kunye naye akukho mqondo wokuthetha ngalo mbandela. Unokwandisa imeko ngokubetha "phantsi kokusasazwa kweenqwelo". Ngendlela, ukusuka kumbono wokusebenza kakuhle kukulungele ukuba "wazinceda". Awuyi kuthanda i-priredatsya ukuyifumana ingqalelo yakhe yonke into engenayo emphefumlweni wakhe, kwaye yona iya kutshisa iphinde ibuyele eqhelekileyo.
"Ngaphantsi kwesandla esishushu."
Umfanekiso ogqithiseleyo xa uvela xa umfazi esichukumiseka xa ethanda ukuxhatshazwa ngokomzimba nangokomzwelo. Oko kungenxa yokuzithiba kwaye uyaphula umntu ovela kwintsapho yakhe, kwaye okokuqala, phantsi "kwesandla esishisayo" sithandekayo. Ngezihlandlo ezinzima ukuphilisa ukuhlaselwa kunye nokucaphukisa kuyimfuneko, ngokusekelwe ngokuthe ngqo kwiimeko. Kukulungele ukulungisa ingxaki enjalo ngemilinganiselo yenkqubo. Ukuba usenalo mntu kwaye ulungele ukunyamezela konke ukuhlaselwa kwakhe komsindo, zama ukumenza uguqulwe kwaye ulahle yonke into enobungozi kwezinye izinto, umzekelo, osebenza naye emsebenzini. Kwaye ukuba awufumani, apha awukwazi ukunceda kuzo zonke ngeengcebiso eziqhelekileyo. Kule meko, kufuneka ufune uncedo kwisazinzululwazi, oza kuba ngumgangatho ophezulu, uya kuba nako ukufumanisa izizathu ezibangela ukuba isithandwa sakho siphumelele, kwaye yintoni inxaxheba yakho kuloo mzuzu. Ngaphezulu, kuya kukunceda uphuhlise isicwangciso sakho sokukhusela ngokufanelekileyo ekuhlaselweni komntu onomsindo.
Akenzi buhlungu, kodwa uyamemeza!
Kakade ke, akusiyo yonke into yamadoda athambekele ekubetheni aze ahlazise umfazi kwisimo esicasulayo. Kodwa ngoncedo lokumemeza nokuxabana nokuthukuthela umsindo kumbindi wangaphakathi - oku kuqhelekileyo kumalungu amaninzi wesini esomeleleyo. Ngoko ke, ukubuya ekhaya ukusuka emsebenzini, ukunyaniseka kumthandekayo ngenxa yesimo sakhe esicasulayo kumadoda kuthathwa njengendlela evumelekileyo kwimeko. Iindaba ezilungileyo kuphela kukuba into eyona nto engayenzayo ukukhala kunye nokuzola. Ukumphatha ngexesha elinjalo kunye neengxabano zakhe, kunye nangakumbi, ukufumanisa isizathu sokuba nomsindo wakhe awufanelekanga. Oku akunakuphumeza nantoni na. Kukulungele ukuya "ngaphantsi komhlaba" kwaye umshiye wedwa, njengoko oku kuyimfuneko. Kodwa ukuzama ukumbonisa ukuba uyaphilile kwaye konke kunokuxoxwa ngomoya ozolileyo kuya kubangela ukuba umntu abe nomsindo ngakumbi. Kwaye awufuni oko!
Uya kufika phi ukuba waqala ukufunga!
Abasetyhini abaninzi bayazibuza umbuzo: "Indlela yokuziphatha ngexesha lokucaphukisa amadoda?". Emva kwakho konke, naye unomdla naye. Ngoko, ukuba ufuna ukukholisa ikhoboka lakho elithembekileyo ngethuba elithile kwaye ungagxininisi imeko, yenza konke ukuthula. Ngokomzekelo, nidla isidlo sakusihlwa, nimbambezele okanye nifumane ukuhlamba okutshisayo, ngaphandle kokuzama ngexesha elifanayo ukuba ungene kumagama omlomo. Musa ukubuza nayiphi na imibuzo kuyo yonke into, vele uqale ukumxelela malunga nendlela ochithe ngayo usuku lwakho okanye ukuba intombi yakho ithole ngumfana omtsha. Iintetho ezinjalo zifana 'nokuduma kwebhola eluhlaza'. Kubalulekile ukuphawula ukuba izihloko ezinjalo, nokuba zikarhulumente eziqhelekileyo, zingabangela "izikrakra zeentlanzi" kubantu, kwaye ngelo xesha kuninzi. Gcoba nje akufanelekanga. Usenjalo, kule meko kunye nemeko yakhe, akukho nto ifanelekile ukuyiqonda. Okukuphela kokhetho kukuba ukuba u-100% uqinisekile ukuba uya kukwazi ukumnceda kwaye, ngaphezu koko, ukwenza ngokucokisekileyo. Kodwa apha kwakhona, kufuneka indlela echanekileyo nechanekileyo, engayi kuba nzima ingxaki.
Iwayini labesetyhini lichanekile .
Isizathu esiqhelekileyo sokucasuka kwendoda sihambelana nokuphathwa kunye noxinzelelo lwabafazi ngokwabo. Indlela efanelekileyo kunye nengqiqo kakhulu yokukhupha indoda yimiqondiso yokucaphukisa kukuba umfazi uyayeka ukusebenzisa amagama akhe nezenzo ukubeka uxinzelelo kuye. Kodwa ukuba uhlala uxinzelele loo ndoda ixesha elide kwaye likhupha phezulu, njengomdlalo ovela kuwo onke amagama akho, kuthetha ukuba akayi kukhawuleza ngokukhawuleza. Ngendlela, le yinto eqhelekileyo kwiqabane elifanelekileyo, okokuqala indlela yokubamba umntu obathandayo, uze uqale ukubuza into eyenzekayo kwaye ufumene into engonwabanga ngayo xa ekhuselekileyo, njengokuthi "andizange ndithethe nto!". Ngelinye igama, ukuba ufuna ukuba umqhubi wakho angabi namava okucaphukisa, musa ukumqumbisa, kwaye akuyi kuba nako ukuphathwa. Ewe, ukuba sele usudlala indima yakho kule nto, kuba indlela efanelekileyo yokuphuma kwimeko iya kuba sizathu kunye nesithembiso sokuthi asiyi kuphinda kwenzeke kwakhona. Emva koko, akufanele abuyele kulo mbuzo.
Kwaye, ekugcineni, khumbula ukuba abameleli besondo esomeleleyo banokubonisa ukucaphukisa kwabo ngaphandle kwezizathu ezibonakalayo, ngenxa yokuba iyancipha ubomi kunye njalo. Olu hlobo lokucaphukisa lubhekwa njengobonakaliso obonakalisa iingxaki ezinzulu ezihambelana nolwalamano lwakho. Ukuze ugweme oku, kufuneka nje ukutshintsha imeko okanye inkambo yobudlelwane bakho kwaye ke umntu uya kukwazi ukukhangela isimiso esicasulayo sawo amanye amehlo. Ndikholelwe, emva koko awuyi kubona ixesha elide ukuhlasela kwakho okuthandayo komsindo nokucaphuka. Inhlanhla kuwe!
Imiqondiso elishumi awayi kutshata naye
Yintoni okufanele ibe yindoda efanelekileyo?
Yintoni enokuyenza nomyeni wakhe onxilisayo?
Iphunga leqhumiso elenza umntu adibanise
Ibhola ekuzalweni okanye i-fitball yabantwana
Isaladi kunye nesipinashi, amakhowe kunye nama-orang
Indlela yokuphatha unyango lwabantu abalahlekelwa yintlungu
I-periwinkle encinci kunye nepinki: izixhobo zonyango kunye nesicelo kwiyeza
Indlela yokulungiselela iiski zokukhula kweenwele ekhaya?